Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny labiera varimbazaha sy ny labiera-News-NingBo COFF Machinary Co., ltd
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny labiera varimbazaha sy ny labiera barley
Fotoana: 2020-06-15 Comment: 59
Izy io dia labiera varimbazaha iray manontolo (labiera varimbazaha iray manontolo dia labiera misy fatrana 11 hatramin'ny 13 ° P). Amin'ny ankapobeny, ny isan'ny alikaola dia 4.8-5.0% vol. Ny tsiro dia mavesatra matetika, toy ny kafe mangidy, miaraka amin'ny malt charred, mahery malemy
Labiera mainty maitso izy io, azo antsoina koa hoe labiera fotsy (karazan-labiera fotsy, raha fotsy fotsy ny varimbazaha ary mena ny volon'ny varimbazaha), ka nanasongadinana ny karazan-labiera varimbazaha. ny fifantohany wort tany am-boalohany dia teo anelanelan'ny 11 sy 14. Ny atin'ny alikaola dia 5.0-6.0% vol (ny masirasira dia azo atao ao anaty tavoahangy, ny masirasira dia azo jerena amin'ny faran'ny tavoahangy, amin'ny loko feno rahona). ny labiera karazana dia manana fofona vaovao (miaraka amin'ny hanitra voajanahary sy tsotra amin'ny varimbazaha, hops ary fanosotra toy ny sôkôlà ao anaty lava-bato), indraindray miaraka amin'ny fofona manitra.
Raha resaka tsiro dia tokony ho tsara sotroina ny labiera barley. Ny vary hordea dia misy ny vokatry ny entona mahasoa, ny sakafo malalaka sy miempo. Izy io dia afaka manampy amin'ny fandevonan-kanina, mampitony ny vavony ary mamaly ny hetaheta ary mamono ny hafanana.
Fa raha resaka sakafo no resahina dia mahasalama kokoa ny labiera varimbazaha. Ny varimbazaha dia manan-karena amin'ny masira, proteinina bebe kokoa, tsy matavy, mineraly isan-karazany ary vitaminina B. mora ny labiera mena ary tsy dia matsiro loatra!
Previous: Red Ale (orza)
Next: Torohevitra momba ny fikojakojana ny fitaovam-pananahana